Home • Human Rights Archive Zimbabwe
Welcome to the Human Rights Archive Zimbabwe
This archive is an initiative of the National Transitional Justice Working Group (NTJWG) which is designed to bring to one central place Zimbabwe’s human rights story, one step at a time. The journey of this archive dates as far back as October 2012, when stakeholders at the 2012 International Transitional Justice Conference on Zimbabwe resolved that Zimbabwe’s history, truth and justice needs required a coordinated collaborative archival process.
Giving a keynote address at the conference, Dr. Undine Whande said, “There is a need to create spaces where Zimbabwe can have the conversation about itself – past, present and future – as it becomes possible and especially across generations, with young people.”
This is why we are creating the Human Rights Archive Zimbabwe, to promote the use of a centralised, publicly accessible digital human rights information centre for Zimbabwe; while at the same time strengthening the capacity of Zimbabwe’s transitional justice actors to undertake purposive archiving for truth, memory, justice and accountability. Through the Archive, stakeholders are able to digitise and make accessible past human rights materials, so as to identify,address gaps and publicise Human Rights Violations for constituencies inadequately documented through the collection of new human rights information.